Semalt: WordPress Plugins Unoda Paunenge Uchiita Zvakanaka
Wordpress iyi webhusaiti yepamusoro ine kushandiswa kwenyika yose. Wordpress inowedzera zvinopfuura chikamu chemaiti yepasi. Kune vashandisi veShokoPress, pane makumi maviri nemakumi mapfumbamwe emapulagi aunokwanisa kuisa. Wordpress website ine unhu hwakanaka hunokonzerwa nekusiyana kwehuwandu hwehutungamiri hwehurongwa hunoshandisa. Mabhizimusi akasiyana-siyana akaziva kukosha kwekuwedzera kwekutengesa kwavo kuburikidza nemasimiti uye kubudirira kweCommerce mabasa - grey silver fascinators ebay.
Ross Barber, nyanzvi inotungamira kubva Semalt , anovimbisa kuti nenzira itsva yekutengeserana kwedhigiri nzira, zvisikwa zvehupenyu ndiyo nzira itsva iyo vanhu vanoshandisa kuisa ruzivo rwakakosha pamabloggi avo uye website.
Kugadzirisa zvisikwa chinhu chinokosha chemuteja wega webhusaiti. Zvizhinji zvezvinhu zveShokoPress website zvinogona kutungamirirwa kuburikidza nekushandiswa kweplugins uye kukusimbisa dashboard. Zvisinei, zvisikwa zvakasikwa ndeimwe chiitiko chinoda chiito chakasiyana. Google yakaratidza kuti kukosha kwehuwandu chinhu chakakosha chinobatsira mawebsite panzvimbo yavo pane zvimwe zvikonzero. Kureba uye huwandu hwezvinyorwa ndezvimwe zvekusika kwewebsite. Zvakakosha kukudziridza zvigaro zvemuurayi zvinogona kukurumidzira nzira yekuisa webhusaiti yako. Kune mazita akawanda eWindowsPlace ayo angashandisa kuumba muurayi. Pakupedzisira, iwe unogona kukwanisa kuziva kuti izwi repi re WordPress rinofanirwa newebsite yako.
Plugin iyi inokubatsira kuti uverenge mashoko uye nheyo yezvinyorwa. Inobatsirawo kuongorora kuverenga kuverenga kwewebhu yako. Shoko Stats Plugin rinobvumira vanhu vari kumhanya mabhuku uye eCommerce websites vanoita shanduro yekuongorora mitauro, chimwe chinhu chinoita kuti zvinyorwa zvive zvakakosha zvayo nyaya yako. Iwe unogona kuwedzera yako webhusaiti yakatarwa muSERPs kuburikidza uchishandisa iyi shanduro. Iri shanduko re robot ine ruzivo rwakadai semufananidzo wekufananidzira wemwedzi wegore wekinyorwa mhinduro, mhemberero dzakaputsika pamwe chete nepamusoro 20 inoita mazwi makuru. Vanhu vazhinji vanobatsirwa kuburikidza nekuvandudza kushandiswa kwemashoko avo ekushandisa kushandiswa mukati mechirongwa chavo.
Chigadzirwa ichi iSixjini Optimization (SEO) plugin. Inobatsira mukuita mabasa akadai sekutarisa zvinyorwa zvinyorwa, kutarisa kwekuteerera uye pamwe nekutsvaga hukama hunoputsika. Mamwe webmasters vanoshandisa chirongwa ichi kuenzanisa nheyo yezvinyorwa zvinyorwa pamwe nekugadzirisa zvinhu zvemarudzi akasiyana-siyana. Ikoko kune sarudzo yekutsvaga meta tags chero peji yewebhu. Paunotanga kuita WordPress yako webhusaiti, zviri pachena kuti hapana pirginji kana kuwedzerwa kunogona kukubatsira mukurikudziridza. Kunyanya Kuwedzera SEO plugin kunogona kukubatsira kugadzirisa unhu hwehuwandu hwehupenyu hwako hunoita iwe web post yako inokosha kune vateereri vako. Uyezve, iwe unogonawo kukwanisa kuisa mazano akaputsika mubasa rako rewebhu.
Iri ipurgin ndiro mutungamiriri mukuru wemabhuku ekublog. Zvinokwanisika kuti vanhu vaone nzvimbo dzavo dzose uyewo vachivakwevera kune dzimwe nzvimbo dzavo. Paunenge uchigadzira webhusaiti yehutano, iwe unowana zvakanyanya kudyiwa kupfuura mumwe angakanganwa kuisa purogiramu padziviriro yekugadzira mabhogi e blog. Editorial Calendar inogona kukubatsira kuti urambe uchienderera mberi nehuwandu hwevadzidzi vako. Iyi plugin inodonha uye inodonha zvinhu zvinogona kukubatsira kuti uwane mamiriro emiti imwe neimwe, ona zvose zvinyorwa uyewo kutarisira zvinyorwa kubva kune vamwe vanyori.